ပရီးမီးယားလိဂ် ပြီးဆုံးချိန်မှာ အာဆင်နယ်အသင်း ဆုကြေးငွေ ဘယ်လောက် ရခဲ့သလဲ? – Gunners' Side
ပရီးမီးယားလိဂ် ပြီးဆုံးချိန်မှာ အာဆင်နယ်အသင်း ဆုကြေးငွေ ဘယ်လောက် ရခဲ့သလဲ?
လောလောလတ်လတ်ပြီးဆုံးသွားခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီအတွက် ပရီးမီးယားလိဂ်အသင်းတွေရဲ့ ရုပ်သံဝင်ငွေစာရင်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါပြီ။ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်နဲ့ဝေးသွားခဲ့တဲ့ အာဆင်နယ်က အနီးဆုံးက စပါးအသင်းထက် ပေါင် ၈သိန်းလောက် နည်းသွားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ဝင်ငွေစာရင်းကတော့ ပရီးမီးယားလိဂ်နောက်ဆုံးပွဲစဥ်မကစားခင်မှာ ထွက်ပေါ်လာတာပါ။
အာဆင်နယ်အသင်းဟာ လီဗာပူးအသင်းနဲ့အတူ UK TV games ပြသမှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီး ၂၉ပွဲ ပြသခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အာဆင်နယ်တို့ အဆင့် ၃နေရာက ချယ်ဆီးအသင်းနဲ့ ရုပ်သံဝင်ငွေ မတိမ်းမယိမ်း ရခဲ့တာပါ။ ခံစားခွင့်၊ အထွေထွေကြေး၊ ရှယ်ယာညီမျှကြေး၊ ကော်မာရှယ်ကြေး၊ အဲ့ဒါတွေအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင် ရုပ်သံကရတဲ့ ဝင်ငွေစုစုပေါင်း အဖြစ် အာဆင်နယ်က ဒီနှစ်မှာ ပေါင် ၁၅၄. ၃သန်း ရရှိခဲ့ပါတယ်။
အာဆင်နယ်ထက် ဝင်ငွေပိုရတဲ့ အသင်းတွေကတော့ မန်စီးတီး (၁၆၄သန်း)၊ လီဗာပူးလ် (၁၆၂. ၃သန်း)၊ စပါး (၁၅၅. ၁သန်း)၊ ချယ်ဆိး (၁၅၄. ၉)သန်း တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ကြီး မန်ယူအသင်းကတော့ ဒီရာသီမှာ ရုပ်သံဝင်ငွေ ၁၄၉. ၈သန်း သာ ရရှိခဲ့ပြီး အသင်းကြီးတွေ အားလုံးထဲမှာ ဝင်ငွေအနည်းဆုံး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကတော့ရုပ်သံလွှင့်ခအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ပရီးမီးယားလိဂ်တစ်ရာသီအတွင်း အဆင့်ရပ်တည်မှုကနေ ဆုကြေးငွေ ဘယ်လောက် ရခဲ့ကြလဲကတော့အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
1. Manchester City £44m
2. Liverpool £41.8m
3. Chelsea £39.6m
4. Tottenham £37.4m
5. Arsenal £35.2m
6. Manchester United £33m
7. West Ham £30.8m
8. Leicester City £28.6m
9. Brighton £26.4m
10. Wolves £24.2m
11. Newcastle £22m
12. Crystal Palace £19.8m
13. Brentford £17.6m
14. Aston Villa £15.4m
15. Southampton £13.2m
16. Everton £11m
17. Leeds United £8.8m
18. Burnley £6.6m
19. Watford £4.4m
20. Norwich City £2.2m
ချန်ပီယံအသင်းနဲ့ ယှဥ်ရင် တန်းဆင်းသွားတဲ့ အသင်းတွေအားလုံးပေါင်းရဲ့ ဆုကြေးငွေက သန်း၃ဝကျော် ကွာဟနေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဆင့် ၁ က မန်စီးတီးနဲ့ အဆင့် ၅က အာဆင်နယ်တောင် ဆုကြေးက ၁ဝသန်းလောက် ကွာခြားနေပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ပရီးမီးယားလိဂ်ဟာ ပွဲစဥ်တိုင်း အရေးကြီးပြီး မြင့်မားလှတဲ့ ဆုကြေးငွေတွေကြောင့်လည်း ပြိုင်ဆိုင်မှုကအစဥ်အမြဲ ပြင်းထန်နေဦးမှာပါ။ (ယခု ဆုကြေးငွေတွေဟာ ပြိုင်ပွဲက ချီးမြှင့်တဲ့ ဆုကြေးငွေသီးသန့်သာ ဖြစ်ပြီး အခြား စပွန်ဆာကြေး၊ ကွင်းဝင်ကြေး၊ မူပိုင်ကြေး၊ ရုပ်သံကြေး၊ စသည့်ဝင်ငွေများ မပါဝင်ပါ)
ဒါကြောင့် အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ယခုရာသီမှာ ရုပ်သံနဲ့ဆုကြေးကနေ ပေါင် ၁၈၉.၅ သန်းထိရရှိခဲ့ပါတယ်။
Tags: Arsenal, EPL
ဂန်ဒိုဂန်ကို ခေါ်ယူဖို့ တကယ်ပဲ ကြိုးစားနေတဲ့ အာဆင်နယ်
နောက်ဆုံးရ အာဆင်နယ် သတင်းများ (28May)